Cumar Finish cashir maka baran karaa Maayarka Hargeysa? | KEYDMEDIA ONLINE
Cumar Finish cashir maka baran karaa Maayarka Hargeysa?
Qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho, ayaa Duqa Gobolka Banaadir ugu baaqaya inuu cashir ka barto Maayarka Hargaysa, isla-markaana wax ka badalo nadaad xumada ku habsatay Caasimadda.
MUQDISHO, Soomaaliya - Maayarka cusub ee magaalada Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge, oo maalmo ka hor loo doortay xilka, ayaa billaabay olole dib loogu soo celinayo muuqaalka nadaafadeed ee caasimadda, wuxuu horkacay boqolaal ruux oo saaka xilli hore ka howl-galay dooxa Hargaysa oo aan tan iyo burburkii dayactir lagu samayn.
Saacado yar ayaa lagu nadiifiyay Dooxa Hargaysa oo saaka yoolku saarnaa, waxaana bulshada kula haday shaqsiyaad caan ah oo uu ka mid yahay Sheekh Dirir, oo dadka ku boorriyay is-xilqaanka.
Maamulka Gobolka Banaadir, ayaa u muuqada kuwo aan dan ka lahayn nadaafad-darrada ka jirta Magaalada Muqdisho, taas oo sababi karta cudurro iyo caafimaad darro hor leh oo ku habsada dadka danyarta u badan ee ku dhaqan Caasimadda.